Ọgwụ mgbochi ọrịa? Nwalee? Ọ bụghị ebe a! Gaa na agwaetiti ebe okpomọkụ Koh Larn nwere obi ụtọ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -emegharị na Thailand » Ọgwụ mgbochi ọrịa? Nwalee? Ọ bụghị ebe a! Gaa na agwaetiti ebe okpomọkụ Koh Larn nwere obi ụtọ
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • Safety • Akụkọ na -emegharị na Thailand • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ dị iche iche
Agwaetiti Koh Larn
Agwaetiti Koh Larn dị na Thailand amaliteghachila ndị ọbịa na-enweghị mkpa igosi ihe akaebe nke ọgwụ mgbochi ma ọ bụ ule na-adịghị mma, agbanyeghị, mgbochi mgbochi COVID ka dị.
Malite taa, obere agwaetiti ahụ dị na Ọwara nke Thailand na -anabata ndị ọbịa na -enweghị igosipụta ọgwụ mgbochi ma ọ bụ ule COVID na -adịghị mma.
Ndị ọbịa mba ofesi ga -egosi paspọtụ ha ebe Thais ga -egosirịrị ID.
Ihe ndọpụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya COVID-19 na-adịkarị na agwaetiti Koh Larn.
Koh Larn mepere ndị ọbịa ọzọ taa, Wenezdee, Septemba 1, 2021 mana ọ gaghị achọ ka e nye ha ọgwụ mgbochi ma ọ bụ gosi ihe nnwale maka COVID-19. A ga -achọ paspọtụ maka ndị mba ọzọ ma ọ bụ NJ Thai maka ụmụ amaala Thai.
Agwaetiti ahụ mechiri nke ugboro atọ kemgbe mmalite oria ojoo a na Ọgọst 9. Maliteghachi Septemba 1 a ga -ahụ ma ndị Thais ma ndị mba ọzọ chọrọ igosi njirimara wee gafee usoro ihe ndọpụ mmekọrịta mmadụ na -emekarị, mana ekwesighi igosi ihe akaebe nke ọgwụ mgbochi COVID-19 ọ bụla ma ọ bụ nsonaazụ nnwale coronavirus na-adịghị mma.
Ọ bụ naanị otu ọnwa gara aga na ihe niile Thailand tụrụ anya na ọ gaghị anabata ndị njem nleta ọ bụla ebe ọ bụla ruo oge ụfọdụ.
Ọrụ ụgbọ mmiri na -abata na site na Bali Hai Pier na isi ọdụ ụgbọ mmiri Koh Larn ga -amalite n'elekere 7:00 nke ụtụtụ, 12:00 ehihie na 5:30 mgbede. Enwere ike ịgbakwunye oge ndị ọzọ dabere na mkpa. Ụgbọ mmiri ọsọ ọsọ nwekwara ike nye ọrụ na ọnụego dị elu ebe ụgbọ mmiri ọkọnọ ga -agba ọsọ dị ka ọ na -adị.
Ozugbo emepere, ụlọ oriri na ọhụ Koụ Koh Larn ga-anọgide na-emeghe ruo elekere asatọ nke mgbede na ikike 8% maka oche n'èzí/ikuku na-adịghị mma yana na 00% maka oche ime ụlọ na ikuku. Agaghị ere ahịa mmanya ọ bụla.
Ụlọ ahịa, gụnyere ụlọ ahịa dị mma, nwere ike ịrụ ọrụ site n'elekere 4:00 nke ụtụtụ ruo elekere asatọ nke mgbede. Ụlọ oriri na ọ canụ canụ nwere ike mepee nke ọma mana enweghị ike mepee ọdọ mmiri, ụlọ nzukọ, ma ọ bụ nye mmemme oriri.
A na -emeghe osimiri maka izu ike, mana anaghị anabata mmemme otu. Mgbakọ a bụ naanị mmadụ 5, oge ị na -alọta abalị na -amalitekwa n'elekere 9:00 nke abalị ruo elekere anọ nke ụtụtụ.
Koh larn, mgbe ụfọdụ a na -akpọ Coral Island na oge ndị ọzọ a na -akpọ Ko Lan, dị n'ụsọ oké osimiri Pattaya na Ọwara Thailand. N'agbanyeghị obere ya - 4 kilomita n'ogologo na 2 km obosara - obere agwaetiti ahụ juputara n'ụsọ mmiri nwere ọtụtụ ihe egwuregwu mmiri dị ka para ụgbọ mmiri yana ebe ntụrụndụ maka ebe obibi na ụlọ oriri na ọ normallyụ normallyụ na -enyekarị efere nri ụbọchị.
Ala ọma jijiji siri ike ama jijiji na Philippines
Ebe nkiri ọhụrụ na ọdụ ụgbọ elu Frankfurt: Onye ọbịa Fraport ...
Ka ụdị COVID-19 na-abawanye, nkpuchi ihu na ụgbọ elu ...
A nabatara ọgwụ mgbochi DNA nke mbụ COVID-19 na India na India
Gaa Britain ugbu a ma ị nwere ike sonyere onye isi oche ETOA Tom ...
Ebe njem ọhụrụ Disney Cruise Line na 2023
Onye isi ala Philippines hapụrụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị
United Airlines: Nweta jab COVID-19 ma ọ bụ fuo
Njem nlele ọgwụ mgbochi ọrịa: Ọ dị mma, ọ dị njọ ma ọ bụ enweghị mmasị?
Eustatius - Saba - Sint Maarten ọhụrụ ...
Ịdọ aka na ntị ncheta nri maka Veggie World Brand
Virgin Atlantic na-ebupute ụgbọ elu ugboro abụọ n'izu ka…
WHO chọrọ onyinye nke ijeri 1 ijeri COVID-19 ...
Enweghị Mai Tai, ọ nweghị Vodka mgbe onye agha F22 Raptor Fighter…
Ọnụọgụ COVID kacha elu na -arị elu na Hawaii ka…
Achọpụtara ndị ọsụ ụzọ na -eme njem nlegharị anya maka ...
Paris - Singapore: Ụgbọ elu Air France maka ọgwụ mgbochi ...
Onye minista na -ahụ maka njem nlegharị anya nke Jamaica na New Canada High ...
Union na -ebo ụgbọ elu Qantas maka oke ọrịa…
Mmadụ asaa nwụrụ n'ọgba aghara ọdụ ụgbọ elu Kabul dịka azụmahịa niile ...
Ndị njem nleta na-achọta Phuket Nightlife na-akwụsị ngwa ngwa na 9
Obere ụgbọ elu na -adaba n'ụlọ ndị agbata obi: 2 ...
Frontier ebuputa Nonstop Belize Flight si Denver ...
Iweghachi Brand USA Act nke ndị omebe iwu US kwadoro
Afọ mmalite mmalite ụgbọ elu
WTM Africa Reigniting Africa Travel & Tourism Ọhụrụ ...
Ndị Hispanik mefuru ijeri $ 113.9 na njem ụlọ na ...
Njem na-enweghị Visa sitere na Palestine gaa St Kitts na Nevis ...
Bloomwell Group na -enweta ego mkpụrụ kacha ukwuu na ...